Laptọọpụ CHUWI, ọ bụ uru kacha mma maka ego? Ha kwesịrị ya?
Ị na-achọ laptọọpụ dị ọnụ ala ma ịchọtala laptọọpụ CHUWI? Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ka ika a dị na ihe kpatara o ji dị na egbugbere ọnụ onye ọ bụla, nọgide na-agụ maka na anyị ga-agwa gị ihe niile.
1 Laptọọpụ CHUWI kacha mma
2 CHUWI ọ bụ ezigbo akara laptop?
3 Laptọọpụ CHUWI ọ na-eji ahụigodo Spanish na-abịa?
4 Laptọọpụ CHUWI ọ bụ ọnụ ahịa kacha ọnụ maka ego?
5 CHUWI laptọọpụ: echiche m
Laptọọpụ CHUWI kacha mma
N'okpuru bụ nhọrọ nke laptọọpụ CHUWI nke ị nwere ike ịhụ na ọrịre taa. Anyị na-akwado ka ị gaa na akụkọ ndị ahụ n'ihi na a na-enye ọtụtụ oge kupọns ego nke 10% ma ọ bụ karịa, ya mere ha nwere ike ịdị ọnụ ala karịa ihe ị ga-ahụ ebe a.
CHUWI GemiBook Kọmputa ...
CHUWI HeroBook Pro bụ akwụkwọ ndetu nke na-enye ọmarịcha imewe yana arụmọrụ dị mma n'ogo 14.1 sentimita. Ihuenyo nwere mkpebi 4K, n'ihi ya, anyị ga-ahụ ihe niile dị mma na, na mgbakwunye, anyị nwere ike ịhụ ọdịnaya ndị ọzọ na obere oghere. Ihe nhazi nke na-ebuli HeroBook Pro bụ a Intel Gemini Lake N4000 nke ga-akpali Windows 10 Ụlọ nke ọ gụnyere kwesịrị ekwesị. Maka nke a, 256GB nke SSD diski na 8GB nke RAM ga-enyekwara aka.
HeroBook Pro bụ emebere maka onye ọrụ nkezi, ma ọ bụ maka ndị chọrọ ịrụ ọrụ na-adịghị achọ ike kachasị elu na ọsọ ọsọ. Ọ bụkwa nhọrọ dị mma maka ndị chọrọ iji akụrụngwa maka ntụrụndụ, ebe ọ bụ na ihe ndị ọ na-eji eme ihe ga-enye anyị ohere ikiri Netflix, Disney +, vidiyo ọ bụla ọzọ ma ọ bụ egwu egwu ma ọ bụ gaa na netwọk mmekọrịta na ezigbo ọsọ, nke na-eme ka ọ dịkwuo mma. ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọ na-ebugo ihuenyo dị mma na mkpebi 4K. Dị ka ihe ọ bụla CHUWI na-emepụta, ọnụ ahịa ya bụ ihe ijuanya, ọbụna karị na-atụle na nke a bụ Ultrabook nwere nhazi dị ka nke gị.
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ Ultrabook dị ọkụ, na-enweghị ịchụ àjà ike, ihe masịrị gị bụ ihe dị ka CoreBook Pro sitere na CHUWI. Ihuenyo ya bụ 13 inch 2K, nke na-eme ka ọ dị mma maka ịrụ ọrụ n'èzí ụlọ ma ọ bụ ịkwaga ya ebe ọ bụla anyị chọrọ ya. Ihe nhazi nke na-ebuli bụ Intel i3, nke ya na 8GB nke RAM na 256GB nke RAM, karịsịa nke ikpeazụ, ga-eme ka kọmputa na-eji Windows 10 arụ ọrụ na-aga n'ihu n'ụzọ dị mfe.
CoreBook na ihe ndị ọ na-eji na-eme ka ọ dị mma maka ndị ọrụ chọrọ kọmputa a pụrụ ịdabere na ya n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ bụ karịa kpọmkwem ebe ọ bụla. Ọ gbasara otu n'ezie ìhè Na nnukwu imewe dị mfe ibufe, na-agụnye ụdị ọdụ ụgbọ mmiri niile, dị ka USB-C na kaadị SD, ka anyị nwee ike jikọọ akụkụ ọ bụla anyị nwere ike ịchọ.
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ laptọọpụ dị fechaa nke anyị nwere ike iji rụọ ọrụ dị arọ karị ma ọ bụ nwee ọtụtụ usoro mepere emepe, anyị ga-eleba anya na CHUWI's GemiBook, nke, site na nkọwa, bụ ezigbo ihe atụ nke ihe Ultrabook bụ. Na-apụta maka ịnya igwe 12GB Ram, nke bụ 4 karịa nke 8GB kwadoro. Ekele maka nke a, ihe niile anyị meghere na Intel Celeron gị agaghị adị arọ. N'aka nke ọzọ, ọ bụ kọmputa nwere draịvụ ike SSD, 256GB na nke a, nke ga-enyekwa ụfọdụ mmetụta ọsọ ọsọ. Sistemụ arụmọrụ ọ na-eji bụ Windows 10. Ihe nlereanya a na-eji ihuenyo 13-inch na mkpebi 4K, nke na-eme ka ọ pụta ìhè na, n'agbanyeghị na ọ bụ obere ihuenyo, anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ọdịnaya na ezigbo mma.
Na mgbakwunye na 12GB nke RAM, ọ bụrụ na anyị ga-eme ka ihe ọzọ pụta ìhè, anyị ga-ekwupụta isi ihe abụọ: n'otu aka ahụ, ọ nwere keyboard backlit, nkọwapụta nke a na-amaghị otú ọ dị mkpa ruo mgbe anyị na-arụ ọrụ na obere ọkụ. ma mee ya na-enweghị ike ịhụ igodo. N'aka nke ọzọ, ihe ọzọ dị ịrịba ama bụ batrị ya, nke dị ntakịrị n'ihi na ọ dị n'ime laptọọpụ inch 13, ọ dabara na chaja ngwa ngwa ma nwee ike. jide ruo awa 7N'ezie, dabere na ojiji na oriri mode nke anyị ahazi na sistemụ arụmọrụ.
Emebere CHUWI GemiBook maka ndị ọrụ chọrọ ịrụ ọrụ na mpụga ụlọ ma chọọ iji ya mee ya mmemme nke ụfọdụ ibu. Ọ nwekwara ike na-egosi maka ndị niile chọrọ ịrụ ọtụtụ ihe aga-eme n'otu oge, dị ka, na mgbakwunye na-arụ ọrụ, na-egwu music na-adịghị nnọọ ìhè ngwa, tọghata videos na ndị ọzọ formats ma ọ bụ ọbụna na-egwu, dị ka ogologo dị ka aha. enwere ike ibugharị ya na Intel Celeron. Ihe ọzọ anyị nwere ike iji nwayọọ mee ya na 12GB nke RAM bụ iji igwe mebere, ya bụ, iji sistemụ arụmọrụ n'ime ọzọ, ma ọ bụ jiri ya dị ka ihe nkesa, n'ime oke.
CHUWI ọ bụ ezigbo akara laptop?
CHUWI bụ akara a mụrụ na China na 2004, wee malite site na imepụta ngwaahịa dị mfe dị ka ndị egwuregwu MP3. N'ime oge ndụ dị mkpirikpi dị otú ahụ, ha enweghị oge iji gosipụta otú ha si dị mma, ma otu nkọwa na-adọrọ uche: ha na-ere nke ọma na Europe na North America, na nke a bụ otu akụkụ n'ihi na ndị ọrụ zụrụ otu n'ime laptọọpụ ha nwere afọ ojuju na ha na ndị ha maara na-ekwu banyere ya.
Ihe ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ na ha jisiri ike bụrụ ndị ahịa nke ụlọ ọrụ kọmputa kacha mma n'ụwa, ya mere A na-emesi obi ike na àgwà mgbakọ. N'aka nke ọzọ, na dị ka anyị ga-akọwa mgbe e mesịrị, ọ na-enye nkwado dị mma, nke kwesịrị ime ka obi sie anyị ike n'ihi na ha agaghị ahapụ anyị "kpọgidere" dị ka ọtụtụ ụdị ndị ọzọ si China. Anyị ga-akọwakwa mgbe e mesịrị na ọnụahịa nke anyị ga-enweta ha ga-adị nnọọ ala, na-enweghị atụfu àgwà.
Laptọọpụ CHUWI ọ na-eji ahụigodo Spanish na-abịa?
O nwere ike ịdị ka ajụjụ iju, mana ọ bụ ezigbo ajụjụ. Igodo ahụ nwere ike ịnwe ọtụtụ nhazi, na ọbụna keyboard nwere ọnụ ọgụgụ igodo dị ka nke anyị chọrọ, ọ bụrụ na ihe a na-ebipụta n'elu abụghị ihe anyị ga-eji, a ga-enwe mgbagwoju anya. Enwere kọmpụta ma ọ bụ ahụigodo mbughari maka mbadamba nkume dị naanị na Bekee, yana ịbụ CHUWI sitere na China, anyị nwere ike iche otu kọmputa ha, mana na Chinese. Ọ dịghị otú ahụ: ha ji ahụigodo Spanish abịa.
Mana n'onwe m, m ga-atụ aro: mgbe ịzụrụ CHUWI, ị ga-ele anya nke ahụ igodo dị n'asụsụ anyị. Ọfọn, n'ezie, a ga-eme nke a na kọmputa ọ bụla ma ọ bụ keyboard, ma m na-ekwu maka ya n'ihi na ha bụ ndị na-eto eto ika na ọ ga-ekwe omume na ụfọdụ ụdị adịghị na Spanish, n'ihi ya, ị ga-aṅa ntị na nke a zuru ezu. Ọ bụrụ na anyị ga-azụta ihe n'ịntanetị, ọ bara uru ịrịọ onye na-ere ahịa ka ọ kwado ya.
Ọzọkwa, e nwekwara ụdị o Ahụigodo akara CHUWI nwere ike ịpụpụ nke na-abịa na-enweghị mkpụrụedemedeN'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha bụ igodo "nọpụ iche" nke anyị na-etinye obere mkpuchi n'elu ebe a na-ebipụta igodo. Ma, n'ọnọdụ ọ bụla, ha bụ ma ọ bụ anyị nwere ike iji ha na Spanish.
Laptọọpụ CHUWI ọ bụ ọnụ ahịa kacha ọnụ maka ego?
Ikekwe ọ bụghị. Ọ nwere ike dị ka ihe ijuanya na m na-ekwu nke a n'isiokwu a, ma ụwa nke nkà na ụzụ dị nnọọ ukwuu na m kwenyesiri ike na e nwere ụfọdụ ika si n'ebe na-enye yiri ngwaọrụ na a yiri ma ọ bụ ọbụna ala price. Mana ọ bụrụ na etinyere nkwado na akwụkwọ ikike na ajụjụ a, azịza m ga-adị iche: Laptọọpụ CHUWI ugbu a bụ nhọrọ kacha mma ma ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ ngwaọrụ nwere ezigbo uru maka ego na, na mgbakwunye, anyị chọrọ ka obi sie anyị ike site na ọrụ ire ere ma jide n'aka na anyị nwere ike ịtụfu nkwa ahụ ma ọ bụrụ na anyị ahụta mmejọ na ngwaọrụ ahụ.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na-achọta ihe ndị China nwere ọnụ ahịa dị oke mma, anyị na-azụta ya, ọ na-amalite ịrụ ọrụ nke ọma, mgbe ahụ, anyị chọtara nsogbu na anyị enweghị ike idozi ya, ya mere anyị nwere ike ịnweta akwụkwọ dị mma ma ọ bụ nweta ihe okike ma mee foto foto. na laptọọpụ. Nke ahụ abụghị ihe anyị ga-adị ndụ ma anyị zụta ika a. CHUWI bụ àgwà, ọnụ ala na nkwado.
CHUWI laptọọpụ: echiche m
Dị ka anyị kọwara na isi ihe ndị gara aga, CHUWI abụghị akara nke na-aga asọmpi nke kachasị mma, ihe na-abụghị ebumnuche ya. CHUWI na-bụ a nnukwu ika maka akpa akọ, ebe ọ bụ na ha nwere ike nweta akụrụngwa nwere ihe ndị dị mma na ọnụ ahịa ọnụ ala. Mgbe anyị nyochara ọnụ ahịa laptọọpụ site na ụdị ndị a ma ama, nke a na-ahụkarị bụ na nke nwere ihuenyo 15.6-inch nwere mkpebi 2K, 8GB nke RAM, i5 processor na diski SSD na-efu anyị ọnụ ọgụgụ kasị elu. Anyị nwere ike nweta otu kọmputa ahụ site na CHUWI maka obere ego.
Nke bụ eziokwu bụ na ee, ihe mejupụtara ya nwere ike ịbụ ntakịrị ihe dị mma, mana nke a bụ nkọwa zuru oke nke "bara ya uru." Na laptọọpụ CHUWI Anyị nwere ike ime otu ihe ahụ dị ka iji kọmpụta akara ọ bụla ka mma, na obodo ndị ọrụ na-akọkwa na ha na-adịgide adịgide, yabụ ọ bụrụ na ike ịzụrụ ihe adịghị mma, egbula oge: Ezubere CHUWI maka gị.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » CHUWI laptọọpụ